lanti Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
Nsonaazụ maka: lanti
Candlechọ mma kandụl ekeresimesi
Ejiri Mma Mma Keresimesi N’ogo Ugo N’egbokoro.
Mee onwe gi oriọna
Ire ọkụ na -eme ka nkasi obi na -eme ụlọ mgbe niile ma nwee ike
Ndị a bụ ụfọdụ ezigbo echiche maka ichoro oriọna. N'ụzọ
Ihe ịchọ mma mara mma n'ime ime ụlọ
Ideasfọdụ n'ime ihe ndozi ụlọ mara mma mara mma nke ukwuu. Na-ewebata gị
Ideasfọdụ echiche mma mma tebụl mara mma
Họrọ ụdị gị! Anyị na-enye gị ụfọdụ ezigbo mara oke ma mara mma
Dechọ Mma Halloween
Halloween bu ezumike a na-eme n’October 31 kariri na
Echiche ole na ole maka kandụl na lan lamps
Igwe kandụl na-eme ka e nwee ọnọdụ pụrụ iche na nke ihunanya. Mgbe
Nnukwu oriọna site na terylọ Mmanya
Nabata n'oge ọkọchị na ngwa ndị eji eme ọfụma. Ihe olu ndi America
Ọkụ bụ ihe dị n’ime ụlọ. Site na nhọrọ ziri ezi nke
Obi abụọ adịghị ya, maka ubi mara mma ọ bụghị naanị n'ụbọchị,
Ihe ịchọ mma maka ogige
Uche icho mma ohuru. Fọdụ aro ndị na-adọrọ mmasị banyere otu